कट्रिना कैफको आखामा १५ मिनेट सम्म हेर्दा … – Nepal Japan
नेपाली समय : 03:11:00
जापानी समय : 06:26:00
Tag: कट्रिना कैफको आखामा १५ मिनेट सम्म हेर्दा …
कट्रिना कैफको आखामा १५ मिनेट सम्म हेर्दा …
Posted on September 8, 2016 by Yadav Devkota
अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा र कट्रिना कैफले पहिलो पटक स्क्रिन सेयर गेको सिनेमा बार बार देखो रिलिजको तयारीमा छ । आफ्नो कामलाई एकदमै गम्भिर रुपमा लिने सिद्धार्थ र कट्रिना अहिले सिनेमाको प्रमोशनका लागि दिन रात नभनी खटिएका छन् । सेप्टेम्बर ९ मा रिलिज हुने सिनेमाको प्रमोशनका क्रममा सिद्धार्थले एजेन्सीसँग गरेको कुराकानी तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
२०१६ को सुरुमा रिलिज भएको फिल्म कपूर एण्ड सन्स राम्रो भएको थियो । त्यही सफलता बार बार देखो बाट पनि आशा गर्नु भएको छ ?
म यो फिल्मबाट निकै आशाबादी छु । यो वर्षको सुरुमा मैले पारिवारिक सिनेमा गेको थिएँ । जसमा दर्शकले मेरो कामलाई पनि रुचाउनु भएको थियो । र यो फिल्म एक प्रेम कथामा आधारित छ । यसलाई पनि दर्शकले मन पराउनु हुनेछ भनने आशा गरेको छु ।
फिल्मको ट्रेलरले धेरैलाई हलिउड फिल्म किल्कको याद दिलाएको छ । के यो फिल्मको कथा किल्कबाट लिईएको हो?
फिल्म किल्कको जस्तै यो फिल्ममाम पनि समयको परिवर्तन मात्र हुन्छ । त्यो भाग बाहेक अरु कुनै पनि स्टोरी त्यससँग मिल्दैन । फिल्मको मौलिक स्क्रिन प्ले श्री रावले गर्नु भएको हो । यो फिल्मको निर्देशक भने नित्या मेहराको हो ।
पहिलो पटक कट्रिनासँग काम गर्दा कस्तो महसुस भयो?
उनीसँग काम गर्दा निकै रमाईलो भएको थियो । एक अभिनेताकोे नाताले प्रेम कथामा आधारित सिनेमामा काम गर्दा अर्कार्लाई बुझन आवश्यक हुन्छ । हामीले फिल्ममा एकअर्काको प्रेमी प्रमीकाको भूमिकामा निभाएका छौँ । यो फिल्ममा अझै हाम्रो प्रेम ८ वर्षको हुदाँ देखि सुरु भएको हुन्छ । त्यही कारण पनि झन् को स्टारको बारेमा धेरै जानकारी हुनु आवश्यक थियो । हामी सूटिङ अघि वर्कसपका लागी गएका थियौँ । वर्कसपमा हामीले केहि समय बितायौँ । एक अर्काका बारेमा जानकारी लियौँ । हामीले सिनेमाको रोमान्टिक सिनका लागि भनेर एकअर्काको आँखामा १५ मिनेट सम्म हेरी रह्यौँ । यो हाम्रो वर्कआउट थियो । यसमा कट्रिनाले पहिले आँखा झिम्काईन । कट्रिना निकै मेहेनती छिन् । उनी निकै लगनशिलताका साथ काम गर्छिन् ।
सिनेमाको पात्र जय वर्मालाई कसरी वर्णन गर्नु हुन्छ ?
जय वर्माले अहिलेको पुस्तालाई निकै प्रेरित गर्छ । अहिले जो कोही करियरमा केन्दि«त भएर काम गर्छन् । कोही पनि २० वर्षको उमेरमा आमा बुबा हुन चाहँदैन । उनीहरु पैसा कमाउन चाहान्छन् । करिअर बनाउन चाहन्छन् । जय पनि आफ्नो भविष्यमा केन्दि«त भएर काम गर्न चाहन्छ । उसको गर्लफ्रेण्ड दिया छ । उसलाई ऊ निकै माया गर्छ । तर, ऊ काममा पनि निकै ध्यान दिन्छ ।
रिलेशनसिपको लागि तयार हुनुहुन्छ ? म तयार छु अझै भन्दिन् । तर, त्यसको महत्व भने बुझेको छु । म अहिले नै यस्तो जिम्मेवारी लिन चाहान्न ।
३५,४६ र ६० वर्षको उमेरमा आफूलाई कहाँ देख्न चाहनु हुन्छ?
म छिट्टै नै ३५ वर्षको हुन्छु । त्यो उमेरमा म अझै धेरै फिल्ममा काम गर्न चाहन्छु । तर, आशा गर्छु पेशागत र व्यक्तिगत जिन्दगी राम्ररी सम्हालन सकुँ । भविष्यमा यदि मैले मलाई बुझने मान्छे पाए भने ब्यवस्थित भएर बस्छु । ४६ वर्षको उमेरमा म आफू फिल्ममा कस्तो देखिन्छु र महिलाहरु मेरा बारेमा के सोच्छन् भन्ने थाहा पाउन चाहन्छु । उनीहरुलाई यो लुक मन पर्छ की ३० वर्षको उमेरको त्यो अन्तर महसुस गर्न मन छ मलाई । ६० वर्षमा म काम गरी रहेको हुनेछु । मलाई घर बसिरहन मन पर्दैन् ।
ब्रदर्सको प्रमोशनका बेला मलाई सिनियर एक्टरसँग काम गर्न मन पर्छ भन्नु भएको थियो ? किन?
मलाई अक्षय कुमारसँग काम गर्दा निकै रमाईलो भएको थियो । हामी बीच अहिले पनि राम्रो सम्बन्ध छ । हामी वर्कआउटको समयमा बेलाबखतमा सँगै जान्छौ । यदि कुनै सिनेमाको कथाले माग्यो भने म सिनियरहरुसँग काम गर्छु ।
करिअरको सुरुवात करण जोहरको फिल्म स्टुडेण्ट अफ द ईयरबाट सुरु गर्नु भएको थियो । तर सिक्वेलमा हुनुहुन्छ । के भन्नुहुन्छ त्यस बारेमा ?
मलाई स्टुडेन्ट अफ द ईयरले धेरै कुरा दिएको छ । फिल्ममा म नभए पनि म फिल्मलाई जहिले पनि माया गर्ने छु । सिक्वेलले पनि बक्स अफिसमा राम्रो कमाई गर्छ होला । फिल्मलाई पुनित मल्होत्राले निर्देशन गर्न लाग्नु भएको छ । सुनेको अनुसार टाइगर फिल्मको लिडमा छन् । त्यस कारण पनि फिल्मले सफलता पाउँछ जस्तो मलाई लागेको छ ।
Posted in कला/मनोरन्जन, वलिउडTagged कट्रिना कैफको आखामा १५ मिनेट सम्म हेर्दा ...